ဒီကမ်ပိန်းမှာ ပါ၀င်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီကမ်ပိန်းမှာ ပါ၀င်မယ်ဆိုရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အကူအညီပေးဖို့ တောင်းခံတဲ့စာတစ်စောင်ရေးပြီး Beyonce ဆီကို ပို့ပေးရမှာပါပဲ။
အဲဒီစာထဲမှာ ကိုယ်က Beyonce နဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာကို ဘယ်လောက်ချစ်တဲ့၊ ဘယ်လောက်အားပေးတဲ့အကြောင်းတွေ ထည့်လို့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကို ဘယ်လောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ထည့်လို့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ အခုတိုက်နေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို အောင်မြင်ချင်တဲ့အကြောင်းလည်း ထည့်လို့ရပါတယ်။
ဒီစာဟာ ပိုမိုတောက်ပတဲ့အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်အပါအဝင် တခြားလူဆီက မတူညီတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို စာတွေကနေတစ်ဆင့် Beyonce ရရှိခံစားမိပြီး အပြည့်အဝမကူညီနိုင်ရင်တောင် နည်းနည်းတော့တုန့်ပြန်မူပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုက ပြည်သူ့စွမ်းအားပါပဲ။ လူမှုကွန်ရက်မှာ ကိုယ့်ကို follow လုပ်ထားတဲ့သူ နည်းခြင်း၊ များခြင်းက အရေးမပါပါဘူး။ ကမ်ပိန်းမှာ ကိုယ့်အသံပါ၀င်လာခြင်းက စွမ်းအားကိုပိုကြီးလာစေပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ လူတွေက ကွဲပြားထူးခြားတဲ့နည်းတွေနဲ့ ပိုပြီးပါ၀င်လာလေလေ ကမ္ဘာကြီးက မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အသံကို ပိုပိုပြီးကြားနိုင်လာလေလေပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကြားသိသွားအောင် ဒီကမ်ပိန်းမှာ ပူးပေါင်းကူညီပေးတဲ့အတွက် အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို အားလုံးနဲ့အတူတူ ပါဝင်လူပ်ရှားခွင့်ရတာကိုလည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကိုယ့်ရင်ထဲကအသံကိုကြားအောင် ဒီကန်ပိန်းမှာပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ကို ဖြစ်စေရပါမယ်။
ဒီကန်ပိန်းရဲ့စွမ်းအားက ငါတို့ရဲ့စည်းလုံးခြင်းတွေဆီက လာမှာပါ။
(၁) Beyonce ကို ငါတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားဘက်ကရပ်တည်ပေးဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူရှိနေပေးဖို့၊ အထည်ချုပ်အလုပ်သမားတွေဖက်ကရပ်တည်ပေးဖို့ကို အသံညီညီနဲ့တိုက်တွန်းရပါမယ်။
(၂) ငါတို့အနေနဲ့ Beyonce အပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရမ်းသာယာလှပတဲ့နေရာတခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုလည်းဖြစ်နေတုန်းပဲဆိုတာ ပြန်အမှတ်ရအောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။
(၃) ငါတို့ရဲ့ပိုစ်တွေကိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အနည်းငယ်စီ မတူအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် စာကြောင်းတိုင်းစားလုံးတိုင်းကို copy နဲ့ paste လုပ်ပစ်တာမျိုးပဲမလုပ်ဖို့ အရမ်းပဲအရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါမှ ကိုယ်တွေရဲ့မတူညီတဲ့စာသားတွေက ကွန်ပျုတာနဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့စာသားတွေမဟုတ်ဘဲ ငါတို့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ရင်ထဲက ထွက်လာတဲ့စာသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ Beyonce က ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားမှာပါ။
ငါတို့က ဒီတိုက်တွန်းချက်တွေကို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့တညီတညာတည်းဖြစ်နေဖို့ကိုတော့ အောက်ပါအချက်တွေကိုပြုလုပ်ပါမယ်။
ဒီ hashtags (#) တွေသုံးမယ်
- https://speakupformyanmar.com/bagan မှာပါဝင်တဲ့ ပုံတွေကိုသုံးမယ်။
တိုက်တွန်းချက်တွေကို တမူကွဲပြားနေဖို့အတွက်တော့ - တစ်ဦးချင်းသီးသန့် ပုံတွေ၊ စာတွေ၊ ခေါင်းစည်းတွေ - ပုဂံမှာရိုက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံတွေကို (တင်ရဲရင်) အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
1) Makingashort personalized message in English. Here are some English examples you can use (တခုကိုရွေးပါ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်စာသားဖြင့်ရေးပါ). Fill in the blanks to personalize your message.
I love your song (Beyonce သီချင်းတွေထဲက ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး သီချင်းနာမည်ရေးပါ) ___. I remember the first time I heard it I was with (သူငယ်ချင်း/ချစ်သူ ရည်းစား/မိသားစု) __ at _______. It made me feel _ (ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ချရေးပါ) ____.
Myanmar loves you and is grateful for your voice! Please support us in our struggle!
I know you’ve been to Bagan, and so you must know whatawonderful place Myanmar is. Myanmar people are ____(ကိုယ့်လူမျိူးနှင့် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအချို့ကို ကိုယ်ပိုင်စာသားဖြင့် ချရေးပါ) ___.
Insertasentence about how the junta is hurting Myanmar: _____
If you still remember Myanmar fondly, would you postasolidarity photo? Please let us know that you are standing with us. And please come visit Myanmar again when these dark times are over.
Second way to make your appeal unique:
2) Includeaphoto of yourself in Bagan, along with the images of Beyonce in Bagan (တင်ရဲမှသာ တင်ပါ)